Xilkaqaadista Guddoomiyihii Maxkamadda Racfaanka: Qarannimo mise Qabyaalad | isbeddel
← الاعتكاف فضائل وأحكام
Aan idhaahdee: Waa la kufsaday →
Xilkaqaadista Guddoomiyihii Maxkamadda Racfaanka: Qarannimo mise Qabyaalad
Maan jeclayn in aan ka hadlo; erey na ha ahaatee. Waayo tan oo kale taxliil ma leh ee waa bullaacad. Haddana, qushiye, bal habacsanaanteeda ila eeg.
Maalintii aan maqlay qolaa dacwad ku soo oogaysa Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda Racfaanka, Sheekh Xuseen Warfaa, isaga ayaan weydiiyay waxa ay tahay dacwaddaasi, isna sidiisii kalsoonida badani ka muuqatay ayuu iigu jawaabay waa niman hunguri kursi dhaqaajiyey aan se wax kaloo macne leh hayn! Markaan sii yar qod-qodayna waxa uu ii sheegay in Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo nin kale ay Madaxweynaha u direen warqad dacwad ah oo ay ku qoran tahay 22 qodob oo eedaymo ah. Markii Madaxweynuhu eegayna uu laalay; haddana ay iyagu mar labaad ku celiyeen. Markaa labaad, buu yidhi, ayuu Axmed Siilaanyo qodob ka mid ah qodobbadii ay ku andacoonayeen u xilsaaray Guddi la yidhi waa Guddida Cusub ee Caddaaladda. Guddidani waxay ka kooban tahay toban nin oo, marka beenta la iska dhawro, nin mooyee inta kale qurjuf iyo qaarjuf miidhan yahay; aduu iska ah dadkaa suuqa jooga ee shaqo dawladeed iyo aqoon sharci toona meel u soo marin. Guddidaas ayaa la yidhi dib u eega oo ka dooda sharcinnimada xadhig ka iibinta maxaabiis budhcad-badeednimo u xidhnaa.
Afar jeer—oo aanay marna xubnaha Guddidaas la sheegay dhannayn— ayay fadhiisteen, oo ka doodeen arrintan. Marna eedaysanaha lagama qayb gelin, eedeeyeyaasha se kanshe ay ku hadlaan ayaa la siiyay. Wasiirka Caddaaladda, Guddidaa Caddaaladda ee la sheegay iyo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ba malaha in tobaneeye habeen ah kamay seexan qafaalashadaa kursigii Guddoomiyaha Maxkamadda Rafcaanka lagula kacay. Fadhigii u danbeeyey ee ay Guddidaasi yeeshaan waxa uu dhacay 21 Ramadaan, 1432; isla fadhigaa ayay ku soo saareen go’aanka xil-ka-qaadista ah; isla fadhigaa ayaana iyaga laftooda (Guddida Caddaaladda) lagu dhaariyey oo lagu xalaaleeyay sharcinnimadooda!
Warka xil-ka-qaadistu sidan ayuu u qornaa:
“… Gudida Cadaalladdu markii ay arkeen danta guud ee cadaaladda ee ay arkeen Qodobada 107, 108 ee dastuurrka qaranka.
Markii ay arkeen dood dheer iyo falanqeyna ay ka yeesheen dacwad la xidhiidha Guddoomiyaha Maxkamada Racfaanka Gobolka Hargeysa oo farro gelin ku sameeyay maxaabiis xukuman oo xadhigii ka iibiyay, dacwaddaasi oo uu u soo gudbiyay Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Somaliland.
Sidaas darted, waxa Guddida cadaalladdu ay go’aamiyeen qodobadan:-
1)- In laga diiday Xeer Ilaaliyaha guud ee qaranka maamuus ka xayuubintii iyo dacwad ka hor oogidii Maxkamada Racfaanka Gobolka Hargeysa.
2)- In shaqadii laga saaray Gudoomiyihii Maxkamada Racfaanka gobolka Hargeysa, laga bilaabo fadhiggii guddida Cadaalladda oo bishu ahayd 21/08/2011” http://gabiley.net/pages/tDetails.php?source=newsarchive&ID=18260&permission=1&audioFile=
Dhowr jeer oo aan Sheekh Xuseen Warfaa ka doodnay maslaxadda ummadda iyo hagaajinta masiirkooda, waxa uu aad ugu niyadsanaa in isbeddel toolmoon iman karo haddii dadka wanaagsani u guntadaan hagaajinta dhaqanka ummadda, isla markaana ay u dhaqmaan si ka duwan sida ay dadku u dhaqmaan. Sidaa darteed ayaanu qof keli ah oo sokeeyihiisa ka mid ah uga ashkatoon waxa ay raggaasi damacsan yihiin. Waxa uu is-lahaa wanaaggaaga iyo kalsoonida aad caddaaladda ku qabtaa waxay kaa leexin doonaan shar kasta oo laguu maleego. Ma se shaqayn niyad wanaaggaasi—weligeed na ka shaqayn mayso Somaliland.
Telefoonno ayaa sida roobka ugu soo hooray ka dib markii warka laga maqlay idaacadda VOA-da lagana akhristay jaraa’iddada dalka. Maxaad noogu soo sheegi weyday arrintan? Ma ilaahay baa cidlo ku dhigay tolbaad leedehee! Maxaa dayro kaa dhigay? Odayaasha reerku waxay isugu imanayaan halkaa iyo halkeer oo arrintan ayaa la lafo-gurayaa ee waa in lagu helaa xilligaa…annagaa la hadlayna oo wallaahi in aan lagu kala baxayn! Dawladda Axmed Laangadhe na—waa siday u dhigeene—joogi mayso hadday degdeg wax uga qaban weydo arrintan. Anigu beri horaan u sheegay in uu shaqo dawladeed faraha ka qaado haddii kale sidooda u dhaqmo, oo illayn la isuma joojinayee, buur ahaado ama buur ku tiirsanaado. Wuxuu odhan jirey: haddii qof kasta oo hagaagsani hoos u foorarsado oo sidii shimbiri ku taagan tahay gorodda laalaadiyo ma malaa’ig baa u soo degaysa oo hagaajinaysa? Waxa uu aad uga cadhaysnaan jirey go’aankii wadaaddada qaar qaateen markii Ina Rayaale ka codsaday, horraantii maamulkiisa, in ay maxkamadaha dalka hagaajiyaan oo CV-yadooda keensadaan. Badanka wadaaddadii berigaa la qaatay foodda may soo gelin shaqooyinkii loo qaatay, aabbo se taas si xun ayuu uga soo horjeeday oo wuxuu u arkayey fursad dahabi ah oo macne la’aan loo lumiyey. Waxa uu odhan jirey dacwadda islaamka ee la sheeganayaa waa been; dacwadina ma tisqaaddo ilaa si dhab ah loo muquurto arrimaha danaha guud ee bulshada iyo kuraasta maamulka. Waa aragti uu waa hore ku qancay, 1970-nadii, markii uu ku biiray dhaqdhaqaaqa diiniga ah ee al-Ikhwaan al-Mulimuun.
1998-kii ayuu shaqada Maxkamadaha dalka bilaabay. Waxa uu soo maray xilal ay ka mid ahaayeen Garsooraha Maxkamadda Hargeysa ee labada gobol ee Hargeysa iyo Saaxil, Guddoomiyaha Maxkamadda Gabiley iyo Guddoomiyaha Maxkamadda Racfaanka. Muddadaas ammaan ballaadhan ayuu ku kasbaday. Maanta se si fudud ayuu uga baxay shaqadii uu wakhtigiisa, fikirkiisa iyo sokeeyihiisaba ku seegay. Weliba isaga oo denbiile laga dhigayo, xadhig iyo hoog na loogu hanjabayo ayuu iridda ka baxay.
Waxaan in badan isku dayey in aan qaddiyadda fahmo; sal iyo baar. Waxase ii soo baxay maaha wax fahan u baahan. Waa bullaacad haddii aad wal-walaaqdo yalaalugo, matag iyo xanuun kaaga soo bikaacayo.
Posted by Warfaa on Seteembar 5, 2011 in Uncategorized